RW Hore ee Soomaaliya oo Oslo buug kusoo bandhigay. - NorSom News
RW Hore ee Soomaaliya oo Oslo buug kusoo bandhigay.
Reysulwasaarihii hore ee Soomaaliya, ahaana madaxweynihii ee maamulka Puntland ee Soomaaliya ayaa sabtidii magaalada Oslo kusoo bandhigay buug uu ka qoray xaaladii kala guurka aheyd ee xiligii uu ahaa reysulwasaaraha Soomaaliya.
Daahfurka Buuga Cabdiwali Gaas ayaa waxaa kasoo qeybgalay boqolaal katirsan soomaalida Norway, wuxuuna Cabdiwali si fiican uga sheekeeyay dhacdooyin muhiim ah oo xiligaas qabsaday iyo aragtidiisa ku aadan guud ahaan taariikhda iyo mustaqbalka Soomaaliya.
Dadka joogay kulanka daahfurka buuga Cabdiwali Gaas ayaa u badnaa aqoonyahanada soomaalida Oslo iyo ardeyda jaamacadaha Norway. Waxaana sidoo kale joogay goobtaas inta badan siyaasiyiinta soomaalida ah ee kujiro heerarka kala duwan ee siyaasada dalkan Norway.
Abdiwali Gaas ayaa Soomaalida Oslo uga mahadceliyay sida balaaran oo ay uga soo qeybgaleen furitaanka buugiisa ee Oslo.
Previous articleUDI-da oo dadka kula talineyso inay sugaan codsiga dhalashada Norway.
Next article(Bergen): Qoys ajnabi ah oo gurigooda uu dab ka kacay. Gabar 9 jir ah oo geeriyootay.